I-Irish Lane Lock Haven. 2 amagumbi okulala iindwendwe ezi-4.
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguWilliam
Ifakwe kwi-5.5 yeehektare kwintaba engaphezulu kwe-Woolrich 8 yeemayile ngaphezulu kwe-Lock Haven, kumda wamawaka eehektare zehlathi likarhulumente kunye nomhlaba wokuzingela kawonke-wonke, ibhayisekile ekufutshane, i-ATV, kunye neendlela ezihamba ngekhephu. Imizuzu engama-38 ukuya eWilliamsport Little League, imizuzu engama-54 ukuya eBeaver Stadium. Umnyango oqhelekileyo ukhokelela kwigumbi eliphezulu labucala. Amagumbi okulala amabini makhulu ngokwaneleyo ukuba angandwendwela ezi-4 okanye ngaphezulu anegumbi lokuhlambela eligcweleyo ekwabelwana ngalo. Ukufikelela ngokupheleleyo kwikhitshi elikhulu, elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokutyela, kunye negumbi lokuhlala.
Le propathi iyafumaneka njengendawo yokurenta enegumbi elinye phantsi koluhlu olwahlukileyo lweendwendwe ezi-1 okanye ezi-2.
Kwabelwana nomniniyo ohlala kwigumbi lokulala kunye nebhafu yangasese ngasemva kwekhaya, ubumfihlo bakho obupheleleyo kwigumbi eliphezulu buqinisekisiwe.
Umabonwakude onesiseko seDirecTV kumagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala. Isiginali yeseli yeVerizon elungileyo ene4G. Verizon Hotspot.
Akukho moya womoya, nangona kunjalo, kunye nehlobo eliqhelekileyo elisezantsi kwi-50 kunye ne-60, iifestile ezivulekileyo kunye nabalandeli besilingi banika umoya ococekileyo wentaba kunye nentuthuzelo.
Nceda ungapheki ngeziqholo ezinamandla ezifana negalikhi, i-curry kunye ne-cumin. Ivumba liya kuhlala kangangeentsuku kwaye undwendwe olulandelayo luya kuchaphazeleka.
1 ibhedi elala abantu ababini, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
Ifumaneka kumgama oziikhilomitha nje ezimbalwa ukusuka edolophini, kufana nokuba uhlala kwindawo embi. Kwimizuzu eli-15 ukwi-Lock Haven apho unokubona imuvi okanye usele kwaye utye kwiindawo zokutyela ezininzi.
Ndisabela kakhulu kwiimfuno zakho kunye nolindelo. Ndibaluleke kakhulu xa ndihamba kwaye ndonwabela amashiti acocekileyo kunye neetawuli ezintle. Ukuba ufuna into ndixelele. Ndisebenza iintsuku ezimbalwa evekini ixesha elininzi uya kuba nalo lonke ikhaya kuwe.
Ndisabela kakhulu kwiimfuno zakho kunye nolindelo. Ndibaluleke kakhulu xa ndihamba kwaye ndonwabela amashiti acocekileyo kunye neetawuli ezintle. Ukuba ufuna into ndixelele. Ndiseb…